Mandra-pahoviana ny trondro iray velona? Midira ary tadiavo ny faharetan'ny trondro | Ny trondro
Mety nanontany tena ianao hafiriana no velona ny trondro, inona ny fiainana antonony ao anaty aquarium ary ny marina dia, azo antoka, tsy afaka nilaza taminao ny isan'ny taona marina aho satria ny trondro dia afaka miaina ora vitsivitsy ka hatramin'ny taona vitsivitsy, arakaraka ny fanoherana ny trondro imbetsaka, firy taona izy ary koa ny fomba fitaizana azy.
Rehefa manana izy ireo anaty fitoeran-trondro, tsy aquariums, ny ankamaroan'ny matihanina milaza fa maharitra izy ireo 2-3 taona satria tsy maharitra ela ny trondro noho ny adin-tsaina iainany ao. Ny sasany kosa milaza fa, raha karakaraina tsara izy ireo, dia afaka maharitra mandritra ny taona maro ary hiaraka aminao amin'ny fiainanao.
Ny marina dia ny trondro novidiantsika no mazàna kely taona (eo amin'ny 2 volana eo ho eo) izay haharetany antsika farafahakeliny roa taona raha mikarakara azy ireo tsara isika. Miankina amin'ny karazany koa, hataonao lava kokoa na fohy kokoa izy io. Ohatra, ireo trondro ampiasaina hanadiovana ny varavarankely, ireo mpanadio, dia mety haharitra mihoatra ny 2 taona raha salama tsara izy ireo ary tsy adin-tsaina, ankoatry ny fitomboany betsaka.
Milaza ny manam-pahaizana fa ny trondro, miaraka amin'ny lalàm-panorenana tsara ary voakarakara tsara (mahita mandra-pahoviana no tsy andehananao hisakafo), afaka miaina izy ireo 10-15 taona any anaty akondro (tsy anaty fiara fitaterana trondro) ary afaka manitatra lava kokoa an'io taona io izy ireo, mihoatra ny an'ny alika. Saingy, araka ny nolazaiko anao, dia tsy maintsy ho aquarium be fikarakarana tsara izy io izay tsy misy tsy fananany.
A "fitsipika mitarika»Milaza amintsika fa raha lehibe kokoa ny haben'ny salan'ny karazan-java-maniry iray, dia lehibe kokoa ny halavany, ka arakaraka ny maha-lehibe azy io, dia ho ela velona kokoa izy, na dia tsy maintsy jerenao aza ny aquarium anao dia tsy mila trondro koa ianao lehibe be satria afaka mihinana trondro hafa.
1 Mandra-pahoviana ny trondro voasary no velona?
2 Mandra-pahoviana ny trondro fotsy no velona?
3 Mandra-pahoviana no velona ny trondro kite?
4 Mandra-pahoviana ny trondro guppy no velona?
5 Mandra-pahoviana ny trondro iray no miaina ivelan'ny rano?
6 Mandra-pahoviana ny trondro no miaina ao anaty ranomasina?
7 Mandra-pahoviana ny trondro rano mangatsiaka no velona?
Mandra-pahoviana ny trondro voasary no velona?
Ny ankamaroan'ny trondro izay vidinay any amin'ny magazay natokana hividianana biby fiompy dia matetika antsoina trondro voasary, karpa na trondro volamena. Izy ireo no karazana malaza indrindra ary iray izay matetika tazanay any amin'ny fitoeran-trondro sy aquarium. Na izany aza, tsy izy ireo no ela velona indrindra.
Ireo trondro ireo dia marefo sy marefo kokoa noho ny eritreretintsika. Izany no antony isian'ny tranga izay ividianantsika ny iray amin'ireo biby kely ireo ary velona mandritra ny volana vitsivitsy fotsiny izy ireo, ary na dia andro vitsivitsy aza. Marina fa io fitsipika io dia tsy tanterahina foana, satria amin'ny fikolokoloana marina dia azontsika atao ny miaritra ny trondro volomboasary miaraka amintsika 2 hatramin'ny taona 3.
Tokony ho ao an-tsaina fa ireo trondro ireo dia notezaina tao anaty dobo lehibe izay itomboany sy hitomboany haingana, na dia tanora aza izy ireo. Noho izany, ireo santionany rehetra izay ao amin'ny fivarotana vorona sy fivarotana biby dia tena tanora.
Mandra-pahoviana ny trondro fotsy no velona?
ny trondro fotsy izy ireo dia iray amin'ireo biby anaty rano manintona indrindra. Mahagaga loko volomboasary sy mena, ampiarahina amin'ny Tsipika fotsy, ataovy tsy ho diso izy. Marina fa ao anatin'ity vondron-trondro ity dia karazana maherin'ny telopolo no napetraka.
Ao amin'ny fonenany voajanahary, ireo trondro ireo dia hita ao anaty rano mafana an'ny Ranomasimbe Pasifika, be mponina miaraka amin'ny haran-dranomasina, miaraka amin'ny anemone, izay manome fiarovana azy ireo amin'ireo biby mety ho mpiremby amin'ny fotoana manome sakafo isan-karazany. Amin'ireny toe-javatra ireny dia velona ireo biby ireo eo anelanelan'ny roa sy dimy ambin'ny folo taona eo ho eo, miankina, eny, amin'ny karazana clownfish izay resahina eo.
Tsy toy ny karazan-trondro hafa izay nompiana nandritra ny androm-piainany, ny trondro dia tsy mila fitandremana mandreraka, ka safidy tsara izy ireo hiditra ao anaty aquarium misy antsika, izay raha tsy misy hafahafa mitranga ary karakaraina tsara izy ireo. afaka mankafy azy ireo isika avy 5 hatramin'ny taona 10.
Mandra-pahoviana no velona ny trondro kite?
ny trondro kite Izy ireo dia iray amin'ireo trondro Aquarium kely malaza. Ny lokony maro isan-karazany dia mahatonga azy ireo ho biby manintona, indrindra ho an'ireo ankizy kely ao an-trano. Ho azy ireo, dia tokony homarihina ihany koa fa be fiarahamonina izy ireo, ka tsy mampiseho olana rehefa miaina miaraka amin'ny karazany hafa.
Ireo toetra rehetra ireo dia mahatonga ny hazandranomasina ho iray amin'ireo trondro azo atoro indrindra ho an'ireo rehetra manomboka amin'ny fialamboly ity. Ankoatr'izay dia biby tsy mila fitandremana firy izy io, na eo aza ny fianakavian'i trondro kitefish na trondro volamena.
Tsy mahagaga raha afaka manana fiainana anaty fahababoana ireto trondro ireto hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 10 taona, raha mbola karakaraina tsara izy ireo.
Mandra-pahoviana ny trondro guppy no velona?
ny trondro guppy Iray amin'ireo karazana tian'ireo mpiompy sy mpankafy izy ireo. Ao anatin'io karazan-javamaniry io dia afaka mahita olona samy hafa isika, amin'ny lafiny loko sy morpholojia, noho izany ny lazany.
Izy ireo dia biby monina amin'ny faritra misy rano velona, ​​indrindra amin'ireo izay manana riaka kely toy ny renirano, farihy ary dobo. Amin'ny tontolo voajanahary dia hitantsika izy ireo any amin'ny firenena Amerika afovoany como el Andriamanitra telo izay iray, Barbados, Venezoela ary ny avaratry ny Brasil.
Ny toetra tsy maintsy ananan'ny rano amin'ireo biby ireo dia tsy maintsy misy: ny mari-pana eo anelanelan'ny 22 sy 28 degre, ny 25 degre no tsara indrindra; ny pH dia tsy maintsy alkaline ary tsy ambanin'ny 6.5 na mihoatra 8. Raha tratrarintsika izany rehetra izany dia ho velona ireo trondro ireo 2 taona.
Toetra mampiavaka ny trondro Guppy
Mandra-pahoviana ny trondro iray no miaina ivelan'ny rano?
Iray amin'ireo ahiahin'ireo mpiompy indrindra ny faharetan'ny trondro velona ivelan'ny rano. Ary, mifanohitra amin'izay eritreretintsika, ireo biby ireo dia afaka miaritra fotoana fohy any ivelan'ny tontolo anaty rano arakaraka ny fepetra.
Raha ivelan'ny rano ny trondro dia ao amin'ny toerana misy mari-pana amin'ny efitra mangatsiaka kokoa ary apetraka amin'ny amboniny izay tsy mandray ny hamandoana haingana, dia mety haharitra amin'ny fiainana hatramin'ny efa ho 1 ora.
Misy tranga izay nitsambikinan'ny trondro, tsy mampino toa ny avy amin'ny fitoeran-trondro na dobo. Raha mitranga izany ary mbola hitantsika velona ny hazandrantsika dia tsy maintsy ampidirintsika haingana araka izay tratra ao anaty kaontenera iray izay manana rano mitovy amin'ny fitoeran-trondro na dobo io. Aorian'izay dia tsy maintsy kosehintsika amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny kaopy izy io, mba hialana amin'ny poti-vovoka mety misy, sns, izay nifikitra tamin'ny hodiny. Zava-dehibe tokoa ny hitadidiantsika fa tsy tokony hokosehintsika amin'ny trondro ny trondro mba tsy hiteraka ratra ivelany. Rehefa avy nandinika azy vitsivitsy Ora 24 Ao anatin'ilay kaontenera ary rehefa voamarinay fa tsy maninona, dia hiroso amin'ny famerenana azy amin'ny fitoeran-trondro na dobo izahay.
Mandra-pahoviana ny trondro no miaina ao anaty ranomasina?
Ao anatin'ny tontolo iainana an-dranomasina dia misy karazany tsy manam-petra, maro amin'izy ireo no manjono. Anisan'ireo karazan-trondro samihafa ny fahasamihafana maro, ary tsy ho latsa-danja ny androm-piainana.
Raha ny mahazatra dia trondro miaina anaty ranomasina sy ranomasina ny ela velona kokoa noho ny sakaizany izay manao toy izany koa amin'ny farihy sy renirano. Misy trondro izay zara raha velona herintaona, fa ny sasany kosa velona hatramin'ny antsasaky ny taonjato. Miavaka, ny Sturgeon sy ny vondrona dia hita miaraka amin'ny 100 taona. Fa raha hanao salanisa ny androm-piainan'ny trondro an-dranomasina isika dia hilaza fa akaiky ny 20 taona.
Raha te hahafantatra ny taonan'ny trondro isika, dia misy tetika azo itokisana. Toy ny peratra voasinton'ny vatan-kazo, raha mijery ny mizana mizaka isika dia manisy andiana tsipika fitomboana ihany koa izy ireo. Ny tsirairay amin'ireto tsipika ireto dia taratry ny herintaona taonan'ny biby. Mba hanaovana izany dia ilaina ny mampiasa vera fanamafisana avo lenta, satria amin'ny maso mitanjaka dia saika tsy azo atao mihitsy.
Mandra-pahoviana ny trondro rano mangatsiaka no velona?
Ny trondro misy rano mangatsiaka dia misy ireo izay miaina amin'ny farihy, renirano ary ny trondro anatiny rehetra natsangana ho an'ny akondro sy tanky trondro. Betsaka ny karazany, saingy, tsy toy ny trondro monina amin'ny rano anaty ranomasina, dia miaina mandritra ny fotoana fohy kokoa izy ireo.
Raha teo aloha isika dia nilaza fa ny trondro an-dranomasina dia mety hahatratra ny androm-piainana avo lenta, na dia mahatratra aza 20 taona ary tarehimarika avo kokoa, ny trondro rano mangatsiaka matetika dia manana androm-piainana manomboka amin'ny roa taona ka hatramin'ny ny 15 taona.
Manantena izahay fa miaraka amin'ny lahatsoratray dia efa manana hevitra mazava kokoa ianao hafiriana no velona ny trondro ary ny androm-piainan'ireto trondro kely (ary tsy dia kely loatra) izay ananantsika matetika ao an-trano io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » trondro » Mandra-pahoviana ny trondro iray velona?
trondro kely dia hoy izy:
tsara mbola velona 4 taona ny sakafoko
Mamaly trondro kely
lyneth :) dia hoy izy:
5 taona ny hazandriko ary ao anaty fitoeran-trondro ary mbola misy sisa tavela
Mamaly an'i lyneth :)
Obed dia hoy izy:
Manana trondro liona aho ary velona 5 taona izao
Valio ny obed
Maty ny hazandriko androany, 13 taona niaraka tamiko. Mahatsiaro ho mahatsiravina aho, nisy fivontosana teo an-dohako izay nitombo tato ho ato. Androany maraina dia natory izy rehefa nifoha maraina foana ary maty ny tolakandro.
Thu PainTer Vaovao dia hoy izy:
Manana trondro liona aho ary mandraka ankehitriny dia velona 13 taona nefa tsy namelana azy tsy nisy fanaovana ambanin-javatra
Mamaly an'i Thu PainTer Fresh
super elisa dia hoy izy:
Ilay trondro rano mangatsiako toa ho faty, ampio aho!
Mamaly an'i superelisa
Efa maty ny hazandriko, naharitra 4 volana
ny hazandriko dia tena milamina ary tsy te hihinana !! Tsy fantatro izay ananany ... nandritra ny roa andro dia nomeko sakafo hafa izy. Tsy haiko raha izany no izy. Vonjeo . dia toy ny maty
diego martinez dia hoy izy:
Nanana trondro maty tamin'ny volana martsa aho ary nifaninana tamin'ny faran'ny volana desambra
Valiny tamin'i Diego Martinez
Genesisy dia hoy izy:
maty ny hazandrako 4 taona dia teleskaopy lehibe io
Mamaly ny génesis
nytcyvette dia hoy izy:
Nanana trondro osika naharitra 13 taona aho.
Ahoana no anaovako azy ho an'ny pH sy ny mari-pana raha manana karazana siklazy marobe ao anaty aquarium ahy aho
Ani dia hoy izy:
ho an'ny 32
Mamaly an'i ani
ny parakeet-ko dia 15 taona
Achilles dia hoy izy:
Manana Acanthurus Achilles aho ary tao anaty aquarium ahy nandritra ny 4 taona isam-bolana ...
Valio amin'i Achilles
nanana trondro maro izy, ny tena velona indrindra dia ny fiakarana: efatra ambin'ny folo taona !!!!!!! Nodimandry izy andro vitsivitsy taorian'ny nahafatesan'ny alika mitovy taona amiko …… .. angamba noho ny alahelo rehefa tsy nahita azy aho dia tsy fantatro raha hahita be aho, fa rehefa nanantona ilay Hercules ny zana-trondro nivezivezy ny refiko raha hoy aho, manofahofa haha
Salama! Ny alikako dia efa nandritra ny telo taona ary tsy te-hihetsika firy ary mijoro amin'ny toerana avo ary miaina haingana be.
lic. ximena dia hoy izy:
tsara fa tsy marina daholo izay lazain'izy ireo
Izaho dia biolojista an-dranomasina
Mamaly an'i lic. ximena
Nanana characius aho nandritra ny 9 taona ary lehibe loatra izany ka tsy mifanaraka amin'ny felatanan'ny tanana ny vatana ary iray hafa tsy dia be taona sy lehibe loatra
anahi dia hoy izy:
Salama, manana trondro irery aho ary ao anaty fitoeran-trondro 50 litatra ary efa manodidina ny 15 taona izany ary tsy haiko raha bebe kokoa ary ny marina fa ny mahantra dia tsy mitandrina tsara
Mamaly an'i anahi
Eny, nanana trondro volomboasary aho, ilay karazana 100 pesetas tamin'izany, ary tao anaty fitoeram-trondro fitaratra, ilay mahazatra, velona 17 taona aho. Mazava ho azy, ny fanovana ny rano isaky ny roa-telo andro ary manadio ireo vato any amin'ny farany ambany.
Ho an'ny trondro kely dia tantara an-tsehatra kely izany rehefa maty izy.
Namela trondro roa ho ahy izy ireo rehefa nangatahina, ary rehefa afaka telo andro dia maty izy ireo efa niaina efa-taona ary karakaraiko tsara izy ireo fa tsy fantatro izay nitranga.
Luis Eduardo Manotas sary placeholder dia hoy izy:
Ny trondro Aequidens diadema (mojarrita) dia mpiremby ny olitra antokona (moka) mamindra ny Dengue, Chikungunya ary Zica; izy io dia mizatra amin'ny ranon'ny kamon'ny tranon'ny trano hampiasana azy io ary miantoka ny famongorana ireo loharano moka.
Valiny tamin'i Luis Eduardo Manotas
Ny hazandranoko efa 100, tsy haiko na trondro sa sokatra xD!
ny hazandrako dia 11 taona lasa izay ary ny fitoeran-trondro dia 35 cm amin'ny 16 cm, ary tsy maninona, very maso fotsiny aho!
mila capellades tsara dia hoy izy:
manana trondro 20 taona isika
Mamaly an'i fina mila capellades
Manana trondro ao an-trano ao anaty fitoeran-trondro aho ary naharitra 15 taona izy ireo nandritra ny 16 taona (trondro misy rano sy trondro antitra antsoina koa hoe mpanadio ambany)
tsiky dia hoy izy:
Manova ny rano ho an'ny hazandrako isaky ny 3 volana na mihoatra aho ary ao anaty fitoeran-trondro izay tsy mety intsony akory. Nahatonga antsika goavambe! Manantena aho fa haharitra 20 taona.
Fanamarihana: iray amin'ireo trinket rano mangatsiaka ireo
Mamaly an'i sori
Manana trondro noforoniny izay molly aho ary tafavoaka velona mandra-pahatongan'ny, 3 taona izy ary novonoiny ho irery izao ary efa 4 taona teo ho eo no niaraka tamiko tao anaty fitoeran-trondro tsotra ary tsy nitandrina. Nampidirina hampiasaina amin'ny andrana biolojia. Tsy mety maty izy hahaha.
Valiny tamin'i Stephanie
Tiako… Manana ny hazandriko avy amin'ny haben'ny phalanx aho. Androany no ananan'izy ireo izany. Rano mangatsiaka 5 taona ao anaty fitoeran-trondro. Mazava ho azy fa nanova azy ireo lehibe kokoa aho. Fa tiako ho ela velona ianao ...
Nomena rano mangatsiaka 17 eo ho eo aho ary tao anatin'ny 15 andro farany dia maty izy ireo. Tsy fantatro izay nanjo azy ireo. Manana 4 volana miaraka aminay izy ireo miampy 6 volana amin'izay nanome izany ho ahy.
Ampianaro azafady dia hoy izy:
Ny alikako Dorozi dia nihinana ny hazandriko nefa heveriko fa velona izy satria henoko miaina
Valio azafady azafady
raulom dia hoy izy:
Manana teleskaopy 2 taona aho ary hikarakara azy mba haharitra 5 taona fanampiny.
Valiny tamin'i Raulom
Raha afaka maharitra ela izy ireo, izahay tao an-trano dia nanana trondro telo tao anaty aquarium nanomboka tamin'ny 2008, maty ny iray 2 taona lasa izay, ary valo volana lasa izay ary mbola misy iray ihany no tazomintsika.
Cardenas dia hoy izy:
Manana trondro misy rano mangatsiaka mora vidy aho, 9 taona izao, tafavoaka velona tamin'ny fiandohan'ny hypothermia aho, tsy fahampian'ny ôksizenina na dia nokaikerin'ny trondro hafa aza aho ary toa tsy ampy izany Indraindray aho mihinana mofo, ka mieritreritra fa hiaraka amiko mandritra ny fotoana maharitra kokoa izy io, ny chiqui dia terrain daholo
Valiny tamin'i Cardenas
Ny hazandranoko dia iray amin'ireo voasary ary 20 taona, irery foana ary ao anaty fitoeram-trondro, 20 litatra izao
Manana trondro 2 ny hazandrako dia mihoatra ny 5 taona
Vonjeo aho azafady IZAHO FANAN'NY mpankafy anao dia hoy izy:
NY PESTIE ANDRO 3, INONA NO ATAO HATONGA HANAO NY DIMY 6 INSTEAD OF 5 ??
Valio NY FANAMPIANAO MBA IANAO NO FANOMPOANAO
pollardo fernandez dia hoy izy:
Manana trondro dick aho izay tsy fantatro hoe hafiriana no hiainany fa tsy hijanona mihetsika izany
Valiny tamin'i pollardo fernandez
Manana lay volomboasary aho. Manana izany ao anaty kaontenera iray izay nomen'izy ireo ahy aho ary ny marina dia mitazona ahy be dia be izy io. 5 taona ny trondro. Ity trondro ity dia manamarika dingana iray amin'ny fiainako, nividy azy aho fony Hiba tamin'ny taona voalohan'ny ESO ary izao dia eo am-pivezivezena aho dia tsapako hoe inona izany. Raha iray amin'ireo andro ireo dia lasa izy, dia misy ampahany amiko miaraka aminy. Toy ny zandrilahy kely izy, na kely toy inona aza izy ireo dia tianao tahaka ny havanao izy ireo.
Fa maninona no tsy nolazainao hoe firy na firy ny androm-piainany?
Ny trondro lebiasinako na puddle dia velona hatramin'ny 12 taona ary maty rehefa antitra, efa nipaoka tampoka ary jamba tamin'ny masony iray, ankoatry ny lokony maitso volafotsy efa lasa mainty sy mahia amin'ny vavony ... Izy dia liana mihitsy aza tamin'ny fihazana trondro kely kokoa toa ireo guppy nomeko azy foana hohaniny ...
Luis Antago Herrera Betancourt dia hoy izy:
Tiako ny trondro mahafatifaty izy ireo, misy karazany marobe noho ny fanazavana
Mamaly an'i luis antago herrera betancourt
Adriana mazzantini dia hoy izy:
Ny hazandrano ao anaty tanky dia velona 15 taona mahery foana, ilay trondro volamena izay ananako ankehitriny dia efa antitra sy mbola velona, ​​tokony ho 16 na 17 taona ary mbola….
Valiny tamin'i Adriana Mazzantini